बाथरुम पसेर युवतीहरुले सोच्ने ११ कुरा | Nepali Virals
बाथरुम पसेर युवतीहरुले सोच्ने ११ कुरा
अप्रिल 3, 2016 | समाज, हट टपिक्स |0comments
पाइखाना, चर्पी, ट्वाइलेट, बाथरुम, वाशरुम, रेस्टरुम अर्थात सिंगल प्राइभेट रुम । जे भने पनि फोहोर त्याग्ने ठाउँ । समय र परिस्थिति अनुसार यसको नाम फेरिदै आएको छ । पछिल्लो समय ब्यस्त जीवनशैलीका कारण बाथरुम रेष्टरुम बन्न पुगेको छ । कामै कामले थिचिएको दैनिकीमा रेष्टरुम पसेर एकैछिन भए पनि शरीरले आराम पाउछ । तर कतिपय भने यो टाइमलाई पनि सदुपयोग गर्न मोबाइल फोन बोकेर बाथरुम पस्छन ।
बाथरुममा पसेको मान्छेले के गर्छ भनेर सोच्नु मूर्खता हुन् सक्छ किनकी यो सबैलाई थाहै भएको कुरा हो । तर पनि कतिपय कुराहरु अचम्म लाग्दा हुन्छन । बाथरुमको विषयमा हामी धेरै चुट्किला र गहन कुरा सुन्न पाउँछौं । भनिन्छ, बाथरुममा नै मानिसलाई अनेकौं सिर्जनशील कुरा फुट्छ । त्यसो त कतिपय चर्चित सिर्जनाहरु बाथरुममै फुरेको सर्जकहरु स्विकार्छन । साहित्यिक रचना, सांगेतिक रचना, फिल्म स्क्रिप्ट देखि भविष्यका योजनाहरु समेत बाथरुममा बन्ने गरेको छ ।
बाथरुम गएको बेला मानिसलाइ एककिसिमको आनन्द र शान्ति महसुस हुन्छ । अध्ययन सर्वेक्षणहरुले पनि देखाएको छ कि पुरुषको तुलनामा महिलाहरु बाथरुममा धेरै समय बिताउछन । अझ नुहाउन बाथरुम जाँदा झन् बढी समय व्यतित गर्छन । त्यसो त कतिपयलाई लाग्न सक्छ महिलाहरु बाथरुम पसेर के के सोच्दा हुन् ? अझ युवतीहरुको बाथरुम मन्त्र के होला ? यो धेरैको जिज्ञासाको बिषय हो ।
पछिल्लो समय बाथरूममा कपडा नै नलगाईकन खिचेको फोटो ट्वीटर, फेसबुकमा हाल्ने तिर्सना बुढाथोकीले के सोच्छीन होला? भन्ने तपाईंलाई लाग्ला उनले त्यो पनि ट्वीटरमा नै भन्ने आशा गर्न सकिन्छ
यस्तो छ युवतीहरुले बाथरुममा सोच्ने ११कुरा
१) धेरै मानिसहरुलाई बाथरुममा गीत गुनगुनाउने बानी हुन्छ । उनीहरु आफुलाइ राम्रो गायक सम्झन्छन् ।
२) के आज कपाल नुहाउँ? होस। आज धुन्न । त्यै पनि मलाइ आज कोसंग भेट्नु छ र ?
३) हे भगवान , यो पानी कति तातो हो । हुन त चिसो पानीले नुहाउन पनि सक्दिन नि ।
४) मैले कपालमा स्याम्फु लगाएको १० मिनेट भइसक्यो । अब धुन्छु ।
५) कंडिस्नर लगाएको २ मिनेट त भयो । अब कपाल धुन्छु ।
६) हे भगवान, म तक्लु हुन्छु क्या हाे ? भुइँभरि कपाल नै खसेकाे छ ।
७) मेरो व्यायफ्रेन्डलाई फोन गरेर बोलाउँकी । उ आउँदा त म तयार भइ सक्छु ,अनि मलाई उसले अफिस छोडीदिन्छ ।
८) नुहाउनुअघि मैले खुट्टाको रौं फाल्नुपर्ने रहेछ । अब त स्कर्ट लगाउन पाउँदिन ।
९) बिना कपडामा म कति भद्दा देखिएको छु । मैले अब व्यायम गर्न सुरु गर्नुपर्छ ।
१०) यो नुहाउने साबुनको सुगन्ध कति मिठोे हो । अाहा !
११) आज के बार हो ? कति गते हो? कतै आज मेरो महिनावारीको दिन त होइन ?
नेपालका ६ महान नारी
प्रचण्डका पाँच कमजोरी